“३ सुताले बनेको डोरी सजिलै चुडीदैन” | eBachan Nepali Christian Magazine
[प्रेम] जिद्दी हुँदैन । १ कोरिन्थी १३:५ख
एफिसी ४:२६-२७ “२६क्रोध गर, तर पाप नगर। घाम अस्‍ताउन अघि नै तिमीहरूको रीस मरोस् २७र दियाबलसलाई मौका नदेओ।”
टिप्पणी: हामीलाई सानो हुँदा खतरनाक जनावरहरु र अवस्थाहरुबाट परै रहन भानिनथ्यो। सुतिरहेको भालुलाई न्घोच्नु वा अरिंगालको गुँडमा लात नहान्नु वा आगो संग नखेल्नु । हामीले अरुलाई रिस उठाउनु हुँदैन र हामी आफै पनि रिसमा पर्नु हुँदैन, जसले हामीलाई त्यस्तो कुरा बोल्न वा गर्न लगाउनेछ र जसको कारण हामीलेपछि गएर पश्चाताप गर्नुपर्नेछ। प्रेम धैर्यवान हुन्छ, त्यसको मतलब यसले हामीलाई सजिलै रिसमा पर्न दिंदैन । रिस एउटा छनोट हो, जस्तो छनोट गर्दछौं त्यसलेनै हामीलाई रिसाउनको निम्ति प्रेरित गर्दछ जब हामीले आफैलाई रिसको आवेगमा हाल्द्छौँ। हामीलाई होशियारी पुर्वक छनोट गर्न भनिएको छ जुनबेला हामी रिसद्वारा परिक्षित हुन्छौं। घमण्ड, जस्तै रिसले पनि हामीलाई बुद्दिमानी छनोट गर्न देखि अन्धो बनाईदिन्छ र खराब छनोट मात्र हाम्रो अघि देखा पर्दछ। किन होला? किनकि हामीलाई अन्धो पार्नु र परमेश्वरको आवाज सुन्नदेखि बहिरो गराउनु नै सैतानले गर्ने कठिन परिश्रम हो र त्यो चाँही हामीले त्यसो गर्न दियौं भने मात्र हुँदछ। जब सैतानले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थिति र सल्लाह देखि अन्धो बनाउदछ, तब हामी त्यसको परिक्षा ल्याउने कुराहरु मात्रै सुन्दछौं र परिणाम स्वरुप हामी शक्तिहीन बन्न पुग्दछौं किनकी हामीले परमेश्वरलाई इन्कार गर्न रोजेका हुन्छौं। परमेश्वरको तुलनामा सैतान केहि पनि होइन तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाँही सैतानको तुलनामा हामी पनि केहि होइनौं यदि हामीले त्यो संग एक्लै लड्छौं भने। एक पुरानो भनाई छ नि “परमेश्वरले हामीले सहन गर्न सक्ने भन्दा बढी दिनुहुँदैन” यो चाँही एकभागको आधा सत्य मात्र हो र हामीले अर्को आधा सत्यलाई पनि पुरा हुन दिनुपर्दछ। त्यो अर्को आधा सत्य चाँही “उहाँको मदतद्वारा” हो र यसैले पूर्ण सत्य चाँही यो हि कि “परमेश्वरले हामीले उहाँको मदतद्वारा सहन गर्न सक्ने भन्दा बढी दिनुहुँदैन।” पछिल्लो भागलाई हामी बिर्षन्छौं र अचम्ममा परि सोच्दछौं हामीले परिक्षाहरु संग लड्दा किन असफल भयौं र आफ्नो रिसाह र धारिलो जिब्रोलाई वशमा राख्न सकेनौं। अन्तमा नतिजा चाँही पछुतो गर्नु मात्र हुन्छ। अनुभवले बताउँछ कि त्यो कुरा सत्य हो तर हरेक पटक जब हामी बिर्षन्छौं र त्यो याद हराउँछ र हामी उहिं पुरानो पाप र गल्ती गरि पठाउँदछौं र किन फेरी गर्यौं होला भनि अचम्म्भित हुन्छौं। त्यसैले हामीले हाम्रो शत्रुलाई पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ जसरी हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई जान्नु आवश्यक हुन्छ।
सायद हामीले एउटा नोट लेखेर हाम्रो बाहुलामा राख्नु आवश्यक हुन्छ ताकि अर्कोपटक हामी सुरुमै परमेश्वरको सामुन्ने जानेछौं जब हामीलाई महसुस हुनेछ कि रिस हाम्रो आत्मामा बढ्दै छ भनेर। जुनकुराले पाप गर्नमा प्रेरित गर्दछ ती कुराहरुको बारेमा सोच्नुहोस् र लेख्नुहोस् र फेरी त्यहि गल्ती गर्नलाग्नुभएको देख्नु भन्दा अघिनै परमेश्वरको सम्मुने गएर त्यसतो पाप स्वभावबाट बच्नको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले निश्चयनै हामीलाई त्यो पापको शृंखलालाई तोड्न मदत गर्न चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वर एक सज्जन हुनुहुन्छ र उहाँले हामीले नबोलाईकन हामीमाथी कुनै जबर्जस्ती पनि गर्नुहुँदैन। सर्वप्रथम हामीले उहाँको सहायता खोज्नु आवश्यक हुन्छ र त्यसपछि उहाँले तुरुन्तै सैतानसंग लड्नुहुनेछ। म तपाईलाई निश्चयता साथ भन्नसक्छु कि जब तपाइले थप सहायता बोलाउनुहुनेछ तब सैतान भागेर जानेछ । हुनत, कतिपय समय मैले पनि आवश्यकता अनुसार यस्तो सल्लाह र सुझाव पछ्याउने गरेको हुँदीन तर जब गर्दछु सधै सकारात्मक प्रतिफल पाएको छु। परमेश्वरको लक्ष्य चाँही उहाँ तपाई र म संगको सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्छ र हामी पनि एक-आपसको असल सम्बन्धमा रहोस भनि उहाँ चाहनुहुन्छ।
९एकभन्‍दा दुई असल हो, किनभने तिनीहरूले आफ्‍नो कामको असल फल पाउनेछन्‌। १०यदि एउटा लोट्‌यो भने त्‍यसको मित्रले त्‍यसलाई उठाउन सहायता गर्छ। तर लोट्‌दा पनि उठाउने कोही साथी नहुने बिचरा! ११त्‍यस्‍तै यदि दुई जना सँगै सुते भने ती न्‍याना हुन्‍छन्, तर एकलै त कसरी न्‍यानो हुने? १२एक जनालाई कसैले जित्‍ला, तर दुई जनाले त आफ्‍ना सुरक्षा गर्न सक्‍छन्‌। तीन सूतले बाटेको डोरी चाँड़ै चुँडिँदैन। १३चेताउनी नलिने वृद्ध तर मूर्ख राजाभन्‍दा निर्धन तर बुद्धिमान्‌ युवक अझ उत्तम हो।”
परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो तीनसुते मध्येको दोश्रो डोरी बन्न चाहनुहुन्छ तर त्यति मात्रै नभई हामीलाई सहायता गरेर उहाँले हामीलाई एकअर्का को निम्ति उत्तरदायी र त्यो तीनसुते मध्येको तेस्रो डोरी बनाउन चाहनुहुन्छ। कतिपय समय परमेश्वरको सहायता अरुहरुद्वारा हामीकहाँ आउँदछ, किन होला? के यस्तो हुन सक्ला, कि हामीले एकअर्कालाई मात्र बलियो नबनाई तर परमेश्वरसंगको सम्बन्ध र संगतीमा छुट्टिएर भन्दा पनि एक भई अझै बलियो भएर बस्न संम्भव छैन होला? यो अवश्य पनि सम्भव छ, म पूर्णरुपले बिश्वास गर्दछु। जब हामी परिक्षाहरु माथी एक्लै विजय पाउने प्रयत्न गर्दछौं, हामीले आफैलाई असफल तुल्याउद्छौ र परमेश्वर पनि हामीले त्यस्तो गरेको वा एक्लै परिक्षाको सामना गरेको चाहनु हुन्न। सर्वप्रथम त हामीले उहाँबाटको सहायतानै खोज्नु पर्दछ तर उहाँले हाम्रो सहायताको निम्ति जुटाउनु हुनेहरु प्रति पनि हामी खुला रहनुपर्दछ वा हातेमालो गर्न सिक्नु पर्दछ। सेवाकाईमा प्राय हामी सबैले परमेश्वरको काम एक्लै गर्न खोज्द्छौं। अन्तत: नतिजा चाहिं सबैकुरा नष्ट भएर सबै छोड्ने स्थितिमा पुग्द्छौं। हाम्रा आवश्यकता चाहिं हामीले सम्हाल्न सक्नेभन्दा धेरै हुन्छ र श्रोत चाँही हामीसंग भएको भन्दा धेरैको आवश्यकता हुन्छ। वास्तवमा परमेश्वरको समयनै उत्तम हुँदछ तर कतिपय समय हामीलाई ढिला भए जस्तो लाग्दछ, बिशेष गरि जब हामी उहाँको प्रतिक्षा गर्दैनौ। हामीले गर्न लागेको छनोट राम्रै भएता पनि उहाँबाटको थप सहायताको निम्ति प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ। थप सहायताको निम्ति प्रतिक्षा गर्नुपर्दछ चाहे त्यो कुनै अरु मानिसबाटको होस् वा पवित्र आत्माबाटको, तर दुवैबाटको भयो भने अझ असल हुनेछ। यो सन्देश मेरो निम्ति एउटा स्मरणपत्र हो कारण मलाई हरेक दिन स्मरण गराउन आवश्यक छ किनकि मैले महशुस गर्नु अघिनै म बिर्षने गर्छु र परमेश्वर भन्दा अघि दौडिरहेको हुन्छु। म शंका गर्छु कि सायद तपाइको पनि त्यस्तै प्रवृति हुनसक्छ र तपाइलाई पनि स्मरण गराईरहनु आवश्यक हुन्छ। सायद हुन सक्छ कि हामीले एक अर्कालाई सम्झाईरहनु पर्दछ ताकि हामी पनि एक-अर्काको निम्ति त्यो तेस्रो डोरी बन्न सकौं। आमेन? आमेन!
Previous: सिलोआँम टुप्पेक (टुसाल) चर्चमाथि भएको घटनामा एक भएर लाग्न महासंघको आह्वान
Next: दाङ चेलापन तालिमबाट ३० विद्यार्थी दिक्षान्तित ।